နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် စားပေးသင့်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူမီးဖုတ် – Trend.com.mm
နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် စားပေးသင့်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူမီးဖုတ်
Posted on April 2, 2018 April 2, 2018 by Wint
ကြက်သွန်ဖြူဆို နှာခေါင်းရှုံ့ ပြီး ၊ ပါးစပ်နံနံ့မှာစိုးလို့ ဝေးဝေးကရှောင်ကြတဲ့ ကိုကိုတို့ ၊ မမတို့ ၊ မောင်လေး ညီမလေးတွေရေ .. ကြက်သွန်ဖြူမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဓာတ်တွေများစွာပါဝင်တာကြောင့် အနံနံ့တာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ ‘ဟင့်အင်း’ ဆိုပြီး ခေါင်းမခါလိုက်ပါနဲ့ဦး …
သဘာဝအရ ကြက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေက ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါများစွာကို ကုသပေးနိုင်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ဆေးဝါးတွေမှာလည်း သူ့ကိုမပါမဖြစ် အသုံးပြုလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူက မီးဖုတ်လိုက်ရင် အနံ့တော်တော်မွှေးတာကြောင့် မစားရရင် မနေနိုင်ဖြစ်ကြမှာပါ။
ကြက်သွန်ဖြူမှာ ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး အဆီနဲ့ အဝလွန်ခြင်းကိုလျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေ ပုံမှန်စားပေးသင့်သလို ကိုယ်ခံအားကောင်းချင်တဲ့သူများလည်း နေ့စဉ်သုံးဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အဆိပ်တောက်ဖြစ်စေမယ့် ဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို ကင်းဝေးစေသလို အရွယ်တင်နုပျိုစေပါတယ်။ ဆေးအဖြစ် ကြက်သွန်ဖြူမီးဖုတ်ကိုနေ့တိုင်း (၆)မွှာစားပေးမယ်ဆို ကျန်းမားရေးအတွက် တော်တော်အားဖြစ်စေမှာပါ။ လူတိုင်းစိုးရိမ်တဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို
ကာကွယ်ပေးပြီး မှိုစွဲကပ်ရောဂါ၊ နှလုံးဖောက်ခြင်းနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းတို့ကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်ပိုတိုးစေတာကြောင့်
သူများထက် အမောခံနိုင်တာပေါ့။ ဒါကြောင့်နှလုံးရောဂါကင်းရှင်းရေး ကြက်သွန်ဖြူမီးဖုတ် စားသုံးပေး ! 😉
နှလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ စားပေးသငျ့တဲ့ ကွကျသှနျဖွူမီးဖုတျ
ကွကျသှနျဖွူဆို နှာခေါငျးရှုံ့ ပွီး ၊ ပါးစပျနံနံ့မှာစိုးလို့ ဝေးဝေးကရှောငျကွတဲ့
ကိုကိုတို့ ၊ မမတို့ ၊ မောငျလေး ညီမလေးတှရေေ .. ကွကျသှနျဖွူမှာ ကနျြးမာရေးနဲ့
‘ဟငျ့အငျး’ ဆိုပွီး ခေါငျးမခါလိုကျပါနဲ့ဦး …
သဘာဝအရ ကွကျသှနျဖွူမှာပါဝငျတဲ့ဓာတျတှကေ ဖွဈတတျတဲ့ရောဂါမြားစှာကို
ကုသပေးနိုငျပွီး ကမ်ဘာတဈဝနျးက ဆေးဝါးတှမှောလညျး သူ့ကိုမပါမဖွဈ အသုံးပွု
လာကွတာတှရေ့ပါတယျ။ ကွကျသှနျဖွူက မီးဖုတျလိုကျရငျ အနံ့တျောတျောမှေးတာ
ကွောငျ့ မစားရရငျ မနနေိုငျဖွဈကွမှာပါ။
ကွကျသှနျဖွူမှာ ကယျလိုရီပါဝငျမှုနညျးပွီး အဆီနဲ့ အဝလှနျခွငျးကိုလြော့ခပြေးနိုငျ
ပါတယျ။ နှလုံးရောဂါရှိသူတှေ ပုံမှနျစားပေးသငျ့သလို ကိုယျခံအားကောငျးခငျြတဲ့
သူမြားလညျး နစေ့ဉျသုံးဆောငျပေးနိုငျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အဆိပျတောကျ
ဖွဈစမေယျ့ ဘတျတီးရီးယားပိုးမှားတှကေို ကငျးဝေးစသေလို အရှယျတငျနုပြိုစပေါ
တယျ။ ဆေးအဖွဈ ကွကျသှနျဖွူမီးဖုတျကိုနတေို့ငျး (၆)မှာစားပေးမယျဆို ကနျြး
မားရေးအတှကျ တျောတျောအားဖွဈစမှောပါ။ လူတိုငျးစိုးရိမျတဲ့ ကငျဆာဆဲလျတှကေို
ကာကှယျပေးပွီး မှိုစှဲကပျရောဂါ၊ နှလုံးဖောကျခွငျးနဲ့ လဖွေတျခွငျးတို့ကို တားဆီးပေး
နိုငျပါတယျ။ သှေးလညျပတျမှုကောငျးပွီး ကိုယျခံအားစနဈပိုတိုးစတောကွောငျ့
သူမြားထကျ အမောခံနိုငျတာပေါ့။ ဒါကွောငျ့
နှလုံးရောဂါကငျးရှငျးရေး ကွကျသှနျဖွူမီးဖုတျ စားသုံးပေး ! 😉
မြန်မာပြည်​သူပြည်​သားတိုင်း ပျော်ရွှင်ရတဲ့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံး မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်
Shazam ဇာတ်ကားဒါရိုက်တာဖြစ်သူက ပရိတ်သတ်တွေကို April Fool လုပ်ပြီးနောက်ပြောင်ခဲ့